Q Anon, ukuvulwa kwe-Epstein, uxhumano lukaClinton, 'umphakathi weqiniso': kuzobe kunjalo! : UMartin Vrijland
Q Anon, ukuvulwa kwe-Epstein, uxhumano lukaClinton, 'umphakathi weqiniso': kuzobe kunjalo!
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-12 Julayi 2019	• 7 Amazwana
Kwabaningi, uDonald Trump wayeyindoda eyayiyokhipha 'ukujula'. U-Anon weza ngokudalulwa komunye komunye futhi nokuthi lokho okubizwa ngokuthi 'iqiniso lomphakathi' kwafika esigodini esigcwele. Ngezembonakaliso ngoJeffrey Epstein, lo mzwa kungenzeka ukwandise ngisho nangaphezulu. "I-pedo-deepstate ekugcineni ivuliwe," ingumqondo. Futhi ngokuzumayo iphinda iphinde iphinde ibuye isihloko kwiwebhusayithi yeZerohedge, ezobonisa ukuthi i-Epstein iyisigqebhezana senkonzo eyimfihlo eyayidinga ukulimaza abantu.
Ake nje uthathe isikhashana bese ubuza umbuzo olandelayo: ingabe sicabanga ukuthi eminyakeni yobudala 'idatha enkulu', ama-smartphone kanye ne-intanethi, ibhulogi lingazi kahle indlela yokuphatha abantu ngokuphendula isidingo seqiniso futhi sisondle nge 'iqiniso'?
Nakuba ingxenye enkulu yabantu ingahle ingavinjelwe, kunengxenye encane ehlelwe kusukela ekuzaleni okungalaleli lokho okuphefumulelwe nokuzilahleka kulowo mbhalo (bheka lapha incazelo), isidingo sokugcina ubuchopho bomuntu bunomatasa no-Alice e-Wonderland unogwaja onogwaja obonakala ejulile futhi obonakala sengathi unamagatsha amaningi. Uzobhekana njalo nezinselele ezintsha. Eqinisweni, ungasho ukuthi labo abaphatha i-intanethi nedatha enkulu bayazi kahle ukuthi ukusesha kobuchopho bomuntu bahamba kanjani futhi bangayiqondisa. Kukhona njalo iphilisi elisha elibomvu elungele ukuthola izambulo eziningi 'zeqiniso'. Ingxenye enkulu yendoda ephefumulelwe iyazi ukuthi iyakhohliswa, kodwa ifuna iqiniso layo ohlelweni lwamandla emgwaqo.
Ubani ongabona ukuthi yiziphi amawebhusayithi owavakashelayo nokuthi yiziphi izihloko ozifundile? Ubani ongabona kahle ukuthi yini oyithandayo noma ukuthi uphendula kanjani kokuthunyelwe kwe-Facebook? Amakhompyutha amakhulu agijima ngemuva futhi angakwazi ukufunda inkulumo yakho ebusweni kusuka kukhamera yakho ye-smartphone, angakwazi ukukala izinga lokushaya kwenhliziyo yakho, angabona kahle ukuthi ukhona nokuthi uphuma nobani, angenza ukuhlaziywa okuzenzakalelayo kwesimo sakho sengqondo futhi ube nokuqonda okugcwele indlela okubuka ngayo umhlaba. Akukho isandla sabantu esithintekayo. Abantu abaningi bayaqaphela ukuthi abezindaba basesandleni semali enkulu, kodwa akusizi yini ukuthola ukuthi ukudalulwa kweqiniso okuningi kuye kwahlolwa? Uma ama-supercomputers amakhulu kakhulu ezikhungweni zedatha zedatha enza uphiko lwe-psychoanalysis oluhle kakhulu lwawo wonke umuntu, kungumntwana olula ukunikeza isidingo 'seqiniso'. U-Alice unelukuluku, ngakho-ke u-Alice unikezwa i-potion magic kanye nomgodi omusha unogwaja isikhathi esizayo.
"Kodwa i-Vrijland, uphinde ugxeke izindaba futhi uzama ukukhomba abantu ngokuhlukunyezwa, ngakho-ke ubamba iqhaza kulo". Ngivame ukubhekisela eminyakeni yamuva nje ekuphikisweni okulawulwayo nokuhlakanipha kwebhokisi lamandla ukuphendula isidingo 'seqiniso'. Ngakho-ke kubalulekile ukuqaphela ukuthi siphila esikhathini lapho kuba khona okungenakwenzeka ukuhlukanisa 'ukukhohlisa' kusuka 'kwangempela'. Isimo nje lapho 'kufaka' izinhlamvu ezihlanganisa umlando wonke kungadalwa kusho ukuthi asikwazi ukwethemba noma yini. Isibonelo, ngubani ongitshela ukuthi uJulian Assange ukhona ngempela? Kungenzeka futhi ukuthi ube ngumlingisi ojulile noma umlingisi futhi yonke indaba ingaba umgodi we-rabbit owodwa, lapho bonke abafuna iqiniso behamba khona. Into enhle mayelana nalesi simiso somuntu onogwaja we-rabbit we-self-digged is ukuthi umgcini we-digger uyazi kahle ukuthi uhola kuphi. Ngizama ukukhomba kuwe ukuthi akufanele ungenele emagodini angaphambi kokugubha unogwaja.
'Umphakathi weqiniso' wuhlelo oluhle lomgwaqo wamandla. Abantu bangakwazi ukuzilahleka ngokuphelele ekufuneni iqiniso uma nje wazi ukuthi ungabakhohlisa kanjani ohlelweni lwakho lomhubhe futhi ungawafaki emgodini ngokwawo. Singama-Alice kuphela eWonderland abese eshaya elinye i-potion ngombhalo othi 'ungiphuze' bese udla elinye ikhekhe ngombhalo othi 'ngidle'. Sikhohliswa ohlelweni lwe-tunnel lwe-truth ngezimbulo zika-Q Anon nomzabalazo wakamuva wokulwa nenethiwekhi yokuhamba ngezinyawo ezungeze uJeffrey Epstein. "UDonald Trump udiliza 'okujulile'"Yebo, yebo (ungenzele ukumomotheka). Sivezwa nge-Truth Magic Drink njalo emva kwesikhathi. Inkohliso enkulu ye-trilogy ye-movie ethi 'The Matrix' yilapho kufanele silandele khona unogwaja omhlophe. Iqiniso elilawulwayo laseHollywood lifana nezindaba ezilawulwayo kanye namanye amaqiniso ezindaba. Ziyimigodi embi ngaphambi kokugubha lapho i-serum yeqiniso kuyikhono elikhangayo kakhulu.
I-Alice e-Wonderland Tunnel of Power izama ukugxila ku-"911," "Wikileaks," "Deepstate," "Jeffrey Epstein," ukuze ukwazi ukungena kulowo mgoqo unogwaja bese ulahlekelwa ohlelweni olungapheli lomgwaqo. Uma nje uqhubeka uhamba emva komvundla omhlophe uzobe ushona enkambini yomunye umhubhe. Kusukela ohlelweni lomugudu wemidiya ejwayelekile, ukunakwa kwakho kuye kwashintsha eminye imigudu yemidiya yemidiya. Yeka ukulandela unogwaja omhlophe! Yilokho okumele ukwenze! Akukho rabbit omhlophe okudingekayo ukukhombisa ukuthi umgodi onogwaja ujulile kangakanani. Kuwukuqaphela ukuthi umgodi onogwaja uwu 'wonderland': umhlaba wezinyamazane, i-Trumanshow, iqiniso elingamanga. Ukuqaphela okubaluleke kakhulu okumele kufinyeleleke ukuthi ubanjwe eqinisweni lezinganekwane nokuthi leyo njongo yilezi: ukukugcina ngokuqhubekayo kuleso senzo se-fairytale. Ukuqaphela okubaluleke nakakhulu kumele kube ukuthi akudingeki sikwazi ukungenelela emigodini ye-rabbit yeqiniso elikhulunywe ngalo bobabili abezindaba kanye nabezindaba ezihlukile. Bamba umhubhe wakho; ngqo ngqo.
Sekuyisikhathi sokuqeda iqiniso le-fairytale. Ubuntu bugcinwa emqinisweni yangempela yamanga egcwele imidiya kanye newebhu emhlabeni jikelele. Akubizwa ngokuthi 'web' lutho. Isicabucabu sakha iwebhu ukuze ibambe inyamazane yayo. Ngokushesha nje lapho umugqa udonsa, isicabucabu siyidonsela empilweni yaso futhi siyifake. Umbono wethu wezwe uncike ngokuphelele ekuboneni amehlo nezindlebe zethu. Sibheka i-TV; ngokushesha nje lapho siphume umnyango sizungezwe amaphephandaba, omagazini nezikhangiso; sibheka izikrini zethu ze-smartphone noma sizwa umsakazo ukhala. Inqwaba yezintambo zewebhu zesicabucabu idlidliza ebhanini lokuthutha. Sekuyisikhathi sokuphuma kulowo mgoqo wenogwaja; ukushiya iwebhu. Okubaluleke kakhulu ukuthi ubani esikukhumbulayo kuqala ngokuqwashisa ngokobuqiniso beTruman show yangempela. Lokho kusho ukuthi kufanele ususe zonke iziteshi ozigcinayo kulelo qiniso lamanga. Khumbula wena ungubani.
Ukufakwa ohlwini kwezixhumanisi: zerohedge.com
I-intanethi, umuthi wolwazi, i-Apple nokuphila okuphakade
I-'gogo 'yinkqubo ye-AI egcwalisa ukuzenzekelayo kwe-avatar-avatar bio-robot
Ingabe abantu abaningi abakuzungezile ngempela (imizimba engenampilo)?
Indawo yonke iyisimo sokufanisa: yonke inkolo, uhlelo lokukholelwa yonke inkohliso
Siyaqhubeka sithatha i-Trumanshow yezombusazwe kanye nabezindaba ngokubaluleke kakhulu
Amathegi: Anon, Epstein, afakiwe, Jeffrey, inethiwekhi yokuhamba ngezinyawo, pedo, abahamba ngezinyawo, Q
12 July 2019 ku-14: 58
Ngokwezinga elikhulu lokhu kuyi-operation net net (psyp), ngoba lokhu kwaziwa ngokudlula iminyaka eyishumi yizinsizakalo kanye nabantu abakwa-script. Kodwa konke mayelana nesikhathi nokuphazamiseka, ngakho ungazitholi kulokhu kuzingelwa kobuciko. Vula
13 July 2019 ku-14: 29
13 July 2019 ku-16: 42
I-Mundus igcwalisa i-decgo ergo decipiatur, izwe lifuna ukukhohliswa, ngakho-ke lizokhohliswa.
16 July 2019 ku-00: 06
16 July 2019 ku-12: 50
ngakho-ke kufanele sisimangele abasolwa abasolwa nge-antics yabo engekho ..
16 July 2019 ku-03: 04
Nginombuzo ohlobene nendaba yakho yangaphambilini.
Uthola kanjani ukuthi unomphefumulo noma cha?
16 July 2019 ku-09: 11
I-avatar engapheli izokhipha yonke imibono yomphefumulo njengengqondo engenangqondo futhi ungalokothi uzibuze ukuthi unomphefumulo. I-avatar engapheli iyosho ukuthi iwukuphela kokuthanda izinto ezibonakalayo, ikholelwa ukuthi akukho lutho ngemva kokufa nokuthi yonke indawo ikhona.
Ngokuyinhloko uzokwazi ukubamba iqhaza emibonweni yenkolo ngokucabangela ngoba ifundwa, kodwa ngeke azibuze ukuthi ungubani ngempela.
Akasoze abuze umbuzo othi "Ungubani mina?" Futhi uyaqiniseka ukuthi "Ngingumzimba wami".
« I-'gogo 'yinkqubo ye-AI egcwalisa ukuzenzekelayo kwe-avatar-avatar bio-robot
Sizoletha kanjani ushintsho olukhulu uma i-99% ingaphili? »
Ukuvakasha okuphelele: 4.163.578
Impi Yezwe YaseMelika eyabikezelwa ibonakala isondele kakhulu: Amasosha e-BLM amasha eGeorgia
ICoronavirus covid-19: esingayizwa kahle iMaurice de Hond noWillem Engel
Incwadi entsha uMartin Vrijland enesihloko esithi 'Coronavirus covid-19 kugcina kuphi lokhu?' kuyatholakala manje
Izitebhisi ze-Escher Penrose zeFvD eziphikisayo, uWillem Engel noMaurice de Hond
NgeSonto ngoJuni 28 kukhombisa iMalieveld uthando, ukubekezela nokulethemba ukuphepha kwe-Virus Madness
UMartin Vrijland op ICoronavirus covid-19: esingayizwa kahle iMaurice de Hond noWillem Engel
I-RCS op ICoronavirus covid-19: esingayizwa kahle iMaurice de Hond noWillem Engel
Benzo Wakker op ICoronavirus covid-19: esingayizwa kahle iMaurice de Hond noWillem Engel
UMartin Vrijland op ICoronavirus covid-19 nesayensi: Ungena kanjani emzimbeni wakho futhi uwudlulisela kanjani?